Ukhuthaza imbokodo kwezokubhala | Isolezwe
Ukhuthaza imbokodo kwezokubhala
Isolezwe / 7 June 2012, 11:35am /
UTHOBILE Msomi ongumubhali wezincwadi Isithombe:GUGU MQADI
UMBHALI osemncane ukhuthaza abesifazane ukuthi bashiye phansi uvalo ukuze kuvele amathalente abo okubhala.
UNksz Thobile Msomi (29) wasePinetown osanda kwethula incwadi yakhe yokuqala esihloko Kuyochitheka Gula Linamasi, uthe wuvalo nokusaba ukuphoxeka okuvimba ukwanda kwabesifazane abasemkhakheni wokubhala.
Uthe ubona ukuthi baningi abesifazane ababhalayo inkinga babhalela emakhosombeni imibhalo yabo igcine ingashicilelwanga ukuze ibonwe nguwonkewonke.
Incwadi yakhe ekhuluma ngothando, ukubekezela nokuxolelana, ingeyokuqala ngqa kanti isifiso sakhe ukuyibona ifundwa ezikoleni.
“Ngifune ukubhala incwadi ezoqeda isizungu iphinde inike isifundo kuloyo ozobe eyifunda,” kuchaza uNksz Msomi.
Eqhubeka echaza, uthe umbhalo oyincwadi akuwona owokukhuthaza abantu ukuthi bafunde kuphela kepha kufanele wenze umfundi acabange futhi azibuze nemibuzo ngalokhu akufundayo.
Incwadi yakhe ikhuluma ngesikhathi samanje futhi ithinta izinkinga abantu ababhekene nazo njengokubuye kugxilwe ekusabalaleni kwegciwane lengculazi nokusetshenziswa kwezidakamizwa.
Khona lapho ibuye ibuyise ithemba ngoba iveza ukubaluleka kokudlulisa izinto ezimbi umuntu aseke wabhekana nazo.
“Akwanele ukuthi thina singababhali siveze izinkinga nje kuphela kepha kufanele siqhamuke nesisombululo. Kumele sikuveze obala ukuthi zikhona izindlela abantu abangaphila ngazo impilo ephelele nengcono ngisho sebethole ukuthi banegciwane lengculazi. Akuvele ukuthi ungakwazi ukunqoba izidakamizwa,” kusho le ntokazi.
Uthe uthando lokufunda kuye kwavukuzwa ngunina onguthisha ngoba wayehlale ebathengela izincwadi.
Yize efunde ezikoleni zesilungu ezazibizwa ngama-Model C kuqala uveze ukuthi uthando lolimi lwesiZulu aluzange lusuke kuye.
Lapho abaningi bebengalindela ukuthi alobe incwadi yesiNgisi uthe ukuletha eyesiZulu yikho abezimisele ngakho kwasekuqaleni.
Ukhuthaze abazali ukuthi bangayeki ukujwayeza abantwana babo ukufunda izincwadi zesiZulu ngisho befunda ezikoleni ezixube izinhlanga.
“Kuvame kakhulu ukuthi babone engathi umuntu okhuluma isiLungu usephumelele empilweni kuthi lona okhuluma isiZulu abukwe engathi usemuva. Akufuneki lokho kuhle nje ukuthi umntwana anikwe amathuba okulwazi ulwimi lakhe,” kusho uNksz Msomi.